Tuesday January 08, 2019 - 08:05:09 in Articles by Super Admin
(Rating 1.3/5 Stars) Total Votes: 3
Daawo geesi hadalyaqaan Hawiye oo jawaab adag siiyay Cabdi Xoosh "Daarood waxaa ka dhashay Ayaan,Iimaan iyo Waris" Full Article
Sir culus Xogta Dahir Alasow iyo dadkii fuliyay qaraxyadii xasuuqa Galkacyo. Daawo Sir culus - Dahir Alasow oo sii daayay magacyadda iyo qabiiladda dadkii abaabulay weerarkii lagu xasuuqay maatadda Soomaaliyeed ee ka dhacay Waqooyigga Galkacyo shalayto ? mase ogtihiin inuu Garowe jooga ninkii qaraxyadda iyo hoowlgalka waday ? Full Article
Daawo tacadigga Dowladda Damujadiid ku kacday - shaqaalahii Deva Hospital iyo Bukaanadii laga eryay? Full Article
Daawo Puntland TV oo booqday Jiidda dagaalka iyo wuxuu been iyo booto baahiyay
Daawo Puntland TV oo booqday Jiidda dagaalka iyo wuxuu been iyo booto baahiyay Full Article
Daawo Wariye Somalia oo su-aal adag weeydiiyay Ra'isulwasaaraha Yahuuda? Full Article
Daawo fadeexadda gabadh Somalia oo Nin Madooba Sexy kula sameeysay Jidka dhexdiisa
Waagacusub.info - Daawo gabadh Somalia oo filim laga duubay iyadoo Sexy nin Madoow ah kula sameeyneyso dariiqa ama wadada taas oo ka dhigan ceeb iyo fadeexo. Full Article
Waagacusub.info- Madaxweyne Xasan Garguurte ayaa kulankii saami qeeybsiga aqalka sare ee Odayaasha ku soo deray sheeko ka yaabisay metelayaashii ka qeybgalaayay kadib markii uu sheegay in go-aanku Federalka yahay in min seddex Xildhibaan oo dheeriya la siiyo Maamuladda Beelaha Isaaq iyo Majeerteen ee Puntland iyo Somaliland. Full Article